19 Novambra 2020 - FJKM Québec - Canada
ROMANA 13 : 11 – 14
13:11 Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika.
13:12 Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan’ny maizina ka hitafiantsika ny fiadian’ny mazava.
13:13 Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro; tsy amin’ny filalaovan-dratsy, na amin’ny fahamamoana, tsy amin’ny fijangajangana, na amin’ny fijejojejoana, tsy amin’ny fifandirana, na amin’ny fialonana.
13:14 Fa itafio i Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany.
Ny Epistily nosoratan’iPaoly ho an’ny Romana dia Epistily lehibe teo amin’ny Teolojia satria ireo ngezalahy rehetra amin’ny fandinihana Soratra Masina dia saika nandinika ary nanazava azy avokoa . Amin’i Paoly ny olom-boavonjy dia :
1-Efa nifoha (and. 11)
Ny fotoana ankehitriny, hoy i Paoly dia tsy fotoana fatoriana intsony. Noho izany, tsy olon’ny torimaso ,tsy olon’ny alina, tsy olon’ny tsy fiasana na ny fialan-tsasatra ny mino. Olon’ny mazava ny mino, olon’ny andraikitra. Olona efa afaka tamin’ny tontolon’ny alina sy ny aizina koa, ka tsy misy zava-maizina mamatotra azy intsony.
2-Tsara fitondrantena (and. 12)
Amin’ny alina dia azo afenina ny zavatra ataon’ny olona, mety ho takona ka tsy misy mahita mihitsy aza izany. Rehefa tonga kosa anefa ny atoandro, rehefa tonga ny andro dia hita miharihary avokoa ny zavatra rehetra atao. Amin’ny maha-kristiana, satria efa ho hita miharihary ny zavatra rehetra atao dia mila mitandrina tsara, amin’izay tenenina ,amin’izay hitondrana ny tena mihitsy. Zanaky ny mazava rahateo no niantsoan’i Paoly ny kristiana (Efes. 5.8b).
3-Mitafy an’i Kristy (and. 14)
Ny fitafiana eto amin’izao andininy izao dia maneho fiarovana. Ny hoe : mitafy an’i Kristy dia tena miezaka miaro ny tena amin’ny filàna samihafa amin’ny alalan’ny herin’i Jesoa Kristy. Izay mitafy an’i Kristy dia arovan’i Kristy. Mila ny herin’Andriamanitra isika raha te-handresy ny asan’ny nofo.
Inona avy ireo singa hamantarana ny maha-olomboavonjy ?
Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM.